आफ्नै श्रीमानबाट कसरी बलात्कृत भईन् यिनी ? (भिडियो हेर्नुहोस्) « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
आफ्नै श्रीमानबाट कसरी बलात्कृत भईन् यिनी ? (भिडियो हेर्नुहोस्)
ठुलोपर्दा डटकम, काठमाण्डौ। संसारमा यस्ता घटना हुन्छन् जुन घटनाले आङ् सिरिङ्ग पार्छ। नेपालमा पनि जघन्य अपराध जसले सामाजिक मुल्य मान्यतालाई त ठेस पुर्याएकै छ त्यती मात्र नभई धेरैको जिन्दगीनै बर्बाद बनाई दिन्छन्।
यस्तै एउटा सत्य घटनामा आधारित रहेर चलचित्र बनेको छ। अर्को साता अथवा असोज चार गते नेपालभर प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘प्राण भन्दा प्यारो’मा आफुले सबैभन्दा बढि माया र विश्वास गरेको श्रीमानबाट महिला कसरी पिडित र बलात्कृत हुन्छन् भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिईएको छ। सामाजिक सम्मान र जीवनमा आँच आउने त्रासले आफै भित्र पिल्सिएको कहालीलाग्दो पिडा ‘प्राण भन्दा प्यारो’मा छ।
कमलकृष्ण निर्देशित सो चलचित्रमा निर्देशक स्वयं साथै अनामिका चौलागाईँ र बाशु पुडासैनीको मूख्य अभिनय रहेको छ। पञ्च परमेश्वर फिल्म्सको ब्यानरमा निर्मित ‘प्राण भन्दा प्यारो’ परिवारको सबैले हेर्नैपर्ने निर्देशक कमलकृष्ण बताउँछन्।